‘प्रतिभा कहिल्यै पलायन हुँदैन, हिरा जहाँ राखे पनि चम्कन्छ’ – Everest Pati
‘प्रतिभा कहिल्यै पलायन हुँदैन, हिरा जहाँ राखे पनि चम्कन्छ’
काठमाडौं। नेपाली गायक दिवेश पोखरेलले अमेरिकन आइडलको दोस्रो स्थान ओगट्न सफल भएका छन् । अमेरिकाको न्यूयोर्कमा बस्दै आएका नेपाली युवा गायक दिवेश पोखरेललाई अमेरिकन आइडलमा अश्वेत गायिका जस्ट सामले जितेकी हुन्।
उनी अमेरिकन आइडल १८औं संस्करणको विजेता बन्न पुगेकी हुन् । अमेरिकन आइडलको दोस्रो स्थान भने दिवेशले पाएका छन् । दिवेशले अमेरिकन आइडलको दोस्रो स्थान ओगटेपछि उनलाई अहिले बधार्यको ओइरो लागेको छ । अमेरिकामा नेपालको नाम चिनाउन सफल दिवेशलाई धेरैले सामाजिक सञ्जालमार्फत बधाई दिएका छन् । यस्तै हास्यकलाकार दिपकराज गिरीले पनि अमेरिकन आइडलमा दोस्रो बन्न सफल नेपाली गायक दिवेशलाई बधाई दिएका छन्।
उनले आफ्नो फेसबुकमा एक स्टाटस लेखी नेपालबाहिर गएपनि नेपालीको प्रतिभा कहिल्यै पलायन नहुने बताएका छन् । उनी लेख्छन् – नेपालमा अमेरीका जाने मान्छेहरूलाइ पलायन भयो भन्छौ
तर प्रतिभा कहिल्यै पलायन हुदैन …
हिरा जहॉ राखें पनि चमक्न्छ ….. यस्को पछिल्लो उदाहरण हुन् दिवेस पोखरेल …. कामना गरौ अहिले प्रत्यक्ष भैरह्को यति ठूलो अन्तराष्ट्रीय प्रतियोगितामा हाम्रै नेपाली यूवाले सफलता हात पार्नेछन् त्यसपछि सबै मिलेर गॉउला” यो मन त मेरो नेपाली हो” !!!\_